Ganda rakasviba: nzira yekuwana sei hwaro hwakanaka? - AFRIKHEPRI
nzira yekuwana sei nheyo yakanaka?
Lyakavakirwa pokubudirira kugadzira-up, iko kwakakwana, kunyangwe kuwoneka, kurema zero, kunovhenekera. Nekuda kwehukuru hwepende rematehwe ematehwe kubva pane rakapinki kusviba kusvika kune rakadzama rima, mavara kana nzvimbo dzehyper pigmentation, kazhinji oiri rudzi rweganda, hazvisi nyore kuwana kumashure complexion inotikodzera.
Kangani pawakaparara pane imwe nheyo mupepanhau kuti umhanye pamambure kana muchitoro uye wozoona, pakupedzisira, kuti hauna zano rekuti ruvara rudzii rwaungakwanise? Kwete inopfuura ruzhinji rwevatengesi kana vanyori vane zvishoma zvekudzidziswa mune rima ganda toni.
Uye maererano nenheyo, hapana kushomeka kwesarudzo nekuti pakati pemadzinza mabhurawu uye ma generalist brand akawedzera madhivhoni awo (makumi matatu mavara mavara e l'Oréal muna 30 semuenzaniso), kune gumi nemaviri. mhando, mazana ezvigadzirwa ivo pachavo vanowanikwa mune zviuru zvemavara mareferensi anowanikwa! Saka unowana sei nzira yako kutenderera?
Iwe unoratidza hwako hwazvino hwaro uye muenzanisi anoratidza kwauri, muchimiro chechisarudzo chako kana mumatanho ese, iwo kana iwo anoenderana zvikuru neyako, mese mune ruvara uye (dzimwe nguva) mukupa kwechigadzirwa. .
Kunyanya: ibhuku rakakura, mabhizimisi akasiyana-siyana paIndaneti kana pedyo newe uye kukwanisa kuenzanisa nhamba dzakaderera.
The least: chenjera, kunyangwe kana vachiratidzika sevanovavarira kana kuti vakavakirwa pamano evatengi, aya masayiti ekufananidza ndeasayiti ekushambadzira ekushambadzira uye mareferensi anotanga kupihwa kazhinji eaya emhando dzakatsigira saiti zvakanyanya.
Iyo mhando ivo pachavo vaishandisa madhiraivha ayo anogona kunge ari kubva pamufananidzo wako kana kuti iwe unotarisana necamera (yakasimbisa chaiyo), kana zvichienderana nesarudzo dzako dzekusarudza dzinogona kuita kuti iwe usarudze yakakodzera kwazvo pane zvigadzirwa zvavo.
Beauty App kubva kuImani
Ita Up Genius of l'Oréal
Mumvuri-Finder yaJane Iredale kune vateveri vekugadzira mineral
Kunyanya: shanda kubva pikicha kana pane yakasarudzika zvinoonekwa zvinotaurisa uye zvinosetsa. Nzvimbo idzi dzinopawo ruzivo rwakawanda pamusoro pekuumbwa kwezvakagadzirwa.
The least: mutengo wekutengesa kana kuti hapana mutengo zvachose uye kutumira kune vatengesi.
Panguva iyo mabloggi ari kuzadza webhu nemaficha awo ekufananidza kana bhenji rekuongorora, zviri pachena kuti kutarisana nechiratidziro, zvakaoma kuzvitsanangura nekuziva mutsara wezvinhu zvese:
Yakave yakajeka: ruvara, inopisa kana inotonhora, hunoti hwepini kana yhizha ...
Ganda redu mhando: oiri, kusanganisa, yakaoma
Rudzi rwemhando yakakodzera: kirimu, poda yakasununguka, compact poda, tsvimbo
Kuvhara: kutenderera, chiedza, chakasimba
Kurapa kwacho: kana neASF, anti-kukwegura, hydrating
Chibereko chatinoda kubudirira: matte, semi-matte, satin, velvety, powdery ...
Kunakidzwa kwekushandisa uye gadzira-up
Organoleptic properties (kunhu, kumira, kuona)
Zvakanakisa kugara uchiedza chigadzirwa uye kugamuchira zano kubva kune yakazvimirira pro uyo anotsanangudza kunyemwerera zvese zviripo kuziva nezve chigadzirwa, kana pasina chikonzero chekuti tora maviri, ane bhurashi yekuishandisa uye maitiro ekufananidza pamwe nekumwe kuchengetedza uye gadzira mhinduro dzakakwana, izvo chigadzirwa chekushandisa kubvisa make-up. A pro uyo achanyanya kupindura mibvunzo yako. Nekuti kwete, tutorials havaiti zvese maererano nerunako kudzidzisa.
Zvimwe zvinyorwa pablogi Beauty Panafrican!
Shea inonyorova, inorerutsa, inodzivirira uye inoshongedza ganda rako nebvudzi
Akagadzira ambura inokwanisa kushandiswa makore makumi masere